ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर - Karobar National Economic Daily
ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर
query_builderDecember 26, 2016 11:33 AM supervisor_account visibility1493
अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक
विगत डेढ वर्षदेखि अजय मिश्र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । मिश्र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको कार्यकारी अधिकृत भएर आउँदा बैंकको अवस्था ज्यादै खराब थियो । संस्थागत सुशासनको अभावमा बैंक लगभग बिग्रेको अवस्थामा थियो । उनी आएपछि बैंकमा निकै ठूलो सुधार आएको छ । मिश्रसँग बैंकको सुधार तथा पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थामा रहेर कारोबारले गरेको कुराकानीः
पछिल्लो समयमा बैंकहरूलाई कर्जा दिन पैसा नभएकै हो ?
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव छ । यसरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुको पहिलो कारण सरकारले खर्च गर्न नसक्नु नै हो । अहिले सरकारी खातामा २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । विकास निर्माणको काम भएको छैन । अर्को विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ ।
भूकम्पपछि जुन परियोजना रोकिएका थिए, ती परियोजनाको काम सुरु भएपछि ऋणको माग बढ्यो, जसले गर्दा निक्षेपको वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारी देखियो भने ऋणको वृद्धिदर त्योभन्दा दोब्बर छ । अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको चाप छ ।
पुँजीवृद्धिलाई तरलता अभावले कस्तो समस्या पार्ने देखिन्छ ?
राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिको निर्णय लिएपछि मर्जर, बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले हकप्रद सेयरको बाढी आएको छ । हामी आफैंले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्दै छौं । अहिले तरलता अभाव छ, तरलता संकटको अवस्था भने आएको छैन ।
पछिल्लो सातादेखि संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर १० प्रतिशतबाट पनि माथि लागेको अवस्था छ । विकास खर्च नहुने हो भने तरलता अभावबाट संकटमा जान भने सक्छ । १० प्रतिशतबाट ब्याजदर माथि जानुको मतलब तरलताले राम्रो संकेत गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा लक्ष्यअनुसारको हकप्रद सेयर बिक्री गर्न केही समस्या पर्ने देखिन्छ ।
ब्याजदरको बढ्दो वृद्धिदरले अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या आउने देखिन्छ ?
समग्र अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धिदरले नराम्रो अवस्था आउने देखिन्छ । यसले रोजगारी घटाउँछ । हाम्रो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हो । ऋण लिएर यही उत्पादन बढाउनका लागि बढ्दो ब्याजदर हितमा रहेको छैन । हामीकहाँ छोटो समयमा तरलताको अवस्था परिवर्तन हुन्छ । कहिले निक्षेप नहुने कहिले ऋण प्रवाह नहुने ।
यसरी तरलता छोटो समयमा परिवर्तन हुनेमा दुई तीनवटा कारण छन् । एउटा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको भिजन अल्पकालीन छ । हामीले दीर्घकालीन योजनालाई कर्जा दिन्छौं । एउटा जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षलाई ऋण दिन्छौं भने सिमेन्ट उद्योगलाई १० वर्षलाई ऋण दिन्छौं । तर, हामीले बढीमा तीन वर्षसम्मका लागि मात्र निक्षेप लिएका छौं ।
हामी अल्पकालीन निक्षेप योजनाबाट चलेका छौं । दीर्घकालीन प्रकृतिका निक्षेप योजना नल्याउने हो भने समस्या पर्ने देखिन्छ । भारतमा यति छोटो समयमा ब्याजदरमा उतारचढाव आउँदैन । हाम्रोमा पछिल्लो चार महिनामा ४ प्रतिशतमा रहेको मुद्दती निक्षेप ८ प्रतिशतमा पुग्यो । यसले उद्योगधन्दालाई सहयोग गर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्दैन ।
ऋण दिने क्षमतामा आएको कमीले सीसीडी रेसियोमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको हो ?
पुँजी निक्षेप र कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा पुनरावलोकन गर्नु हुँदैन । हामीले अहिले चलाउने भनेको जनताको पैसा हो । भोलि केही गरेर निक्षेपकर्तालाई पैसा चाहियो भने त्यो बेलाको दबाब हामीले कहाँबाट थेग्न सक्ने ? त्यसकारण अहिले ८० प्रतिशतको सीसीडी रेसियोलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
अर्थतन्त्रमा ०६५/६६ को जस्तो अवस्था आएको हो ?
०६५/६६ सालतिर पुँजीवृद्धिको निर्णयका कारण सेयर बजार बढेको थियो भने घरजग्गाको कारोबारमा समेत वृद्धि भएको थियो । अहिले पनि सेयर बजार बढेर पछि घटेको छ । घरजग्गाको कारोबार पनि बढेको छ । नेपालमा सेयर बजार बुम भएपछि घरजग्गाको कारोबार बढ्ने गरेको छ ।
आजभन्दा ५ महिनाअघि नेप्से १८०० बिन्दु पुगेपछि घरजग्गाको कारोबार बढ्यो । हामीकहाँ सेयर कारोबारीहरू घरजग्गाका पनि कारोबारी छन् । एउटै व्यक्तिले दुईतिर लगानी गरेका छन् । अहिले नेप्से इन्डेक्स तल आएको छ भने घरजग्गाको कारोबारमा पनि विस्तारै मन्दी आउने देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा हिजोको दिनमा पुँजी बढाउने क्रममा सम्झौता गरिएको हुँदा ०६५/६६ सालमा समस्या आएको थियो । अहिले त्यो समस्या आउनेछैन । त्यो समयमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण पनि प्रभावकारी थिएन । अहिले सुपरिवेक्षण प्रभावकारी छ । अहिले संस्थागत सुशासन कायम नगर्ने व्यक्ति वित्तीय प्रणालीमा रहेका छैनन् ।
जारी भएको हकप्रद सेयर सबैको बिक्री भएको छ । वित्तीय प्रणालीमा अहिलेको तरलता अभाव अल्पकालीन अवधिका लागि भएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । निक्षेप बढाउनका लागि पनि अल्पकालीन प्रकृतिका योजना आएका छन् । माघदेखि विकास खर्च बढेमा तरलता अभाव हट्छ ।
त्यो अवस्थामा मैले फागुनमा गएर हकप्रद जारी गर्दा सेयर बिक्री नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले जारी भएका हकप्रद बिक्रीमा केही समस्या भएको हो । वित्तीय प्रणालीमा हिजोको जस्तो समस्या आउनेछैन ।
अघिल्लो वर्ष निक्षेप बढ्यो, ऋण गएन । अहिले ऋण प्रवाह केमा बढेको हो ?
अहिले तरलता केही अभाव भएपछि राम्रो भएको छ । हामीकहाँ अहिले सय करोडको फाइल पेन्डिङमा छ । साना तथा मझौला कर्जाका फाइल पेन्डिङमा बस्न थालेका हुन् । अहिले मार्जिन लेन्डिङ माग्न कोही आएको छैन । घरजग्गाका लागि ऋण माग्न कोही आएको छैन । साँच्चिकै अहिले वास्तविक क्षेत्रमा ऋण माग्न आएका छन् ।
ट्रेडिङ, साना तथा मझौला उद्योग गर्नेहरू ऋण माग्न आएको अवस्थामा बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । किनभने अहिले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको नजिक पुगेको अवस्था छ । असोज मसान्तसम्ममा हेर्नुहुन्छ भने मार्जिन लेन्डिङमा गएको थियो भने रियलइस्टेट गएको थियो ।
अहिले सबैभन्दा बढी ऋण दिने सम्झौता भएको जलविद्युत्मा हो । तर, जलविद्युत्मा सम्झौताअनुसारको ऋण गएको छैन । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् क्षेत्रमा दिने प्रतिबद्धता गरेका छौं । पैसा भने जम्मा १३/१४ करोड रुपैयाँ गएको छ ।
अहिले प्रवद्र्धकले ऋण मागेमा समस्या आउन सक्छ । तर, प्रतिबद्धताअनुसार ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने सम्झौता गरेको अहिले निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत पुगेको छ ।
पुँजीवृद्धिले विकास बैंकको संख्या कति हुने भए त ?
पुँजीवृद्धिका कारण १२ वटाजति राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक हुने छन् । अहिलेको ट्रेन्डमा त्यो देखिन्छ । क्षेत्रिय स्तरका १५ वटाजति संस्था हुनेछन् । वाणिज्य बैंकको हकमा पनि २८ वटा हुने देखिन्छ ।
बिग्रेको संस्थाको सुधार गर्नुभयो । मर्जर पनि गर्नुभयो । कत्तिको सहज भयो काम गर्न ?
धेरै सहज भयो । हामीकहाँ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको टिम स्प्रिड राम्रो छ । संस्थागत सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर काम गरेका छौं । मर्जरमा मेरा लागि तेस्रो मर्जर थियो । पहिलो दिनदेखि मर्जरमा आउने समस्यामा कर्मचारी मिलान र सेयर स्वाप पहिलो दिनदेखि मिलायौं ।
मर्जरको सम्झौता गरेपछि पहिलो दिनदेखि कर्मचारीलाई मिलाउन लाग्यौं, यसले एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि कुनै समस्या देखिएन । सञ्चालक समितिमा कुनै समस्या आएन र कर्मचारी मिलान पनि राम्रो भयो भने सेयर स्वाप रेसियोमा पनि राम्रो भएको हुँदा मर्जरपछि आउन सक्ने समस्या केही पनि देखिएन ।
बजारमा यसले सन्देश पनि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक राम्रो छ भन्ने भयो । बैंकका लागि यो एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भयो । मैले सीईओका रूपमा पद बहाली गर्दा नेटवर्थ पनि पोजेटिभ भएको अवस्था थिएन । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा मैले बहाली गरेको वर्ष ११ प्रतिशत र अर्को वर्ष २४ प्रतिशत बोनस दिन सफल भयो ।
यस्तै ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दै छौं । अहिले हाम्रो आम्दानी अनुपात विकास बैंकहरूमा दोस्रो स्थानमा रहेका छौं । यस्तै शाखा सन्जालका हिसाबले दोस्रो स्थानमा छौं भने व्यवसायका आधारले तेस्रो स्थानमा रहेका छौं । हामीले एक–दुई वर्षभित्रमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई विकास बैंकहरूमा एक नम्बरको बनाउने लक्ष्य लिएका छौं ।
वित्तीय क्षेत्रमा अहिले धेरै नयाँ कानुन आए । विकास बैंकले मागेको कुरा कानुनले दियो ?
दिएन । साढे २ अर्बको पुँजी भनेको हिजोको वाणिज्य बैंकभन्दा पनि ठूलो हो । यस्तो अवस्थामा हाम्रा बैंक ग्यारेन्टीहरू स्वीकार नगर्ने कारण छैन । नियामक एउटै भएपछि सबै समान हो ।
हामीले एलसी खोल्न नपाउने र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । वाणिज्य बैंकको दायरा निकै फराकिलो हुने र विकास बैंकको दायर निकै संकुचन भएको हो । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको वाणिज्य बैंकसँग हो । विकास बैंकको प्रतिस्पर्धा विकास बैंक छैन, वाणिज्य बैंकसँग छ ।
हाम्रो माग के हो भने आफ्नो पुँजीअनुसारको व्यवसाय गर्न पाउनुप¥यो । साँच्चिकै युनिभर्सल बैंकिङ कारोबार लागू गर्ने हो भने पुँजी आधारको काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यो अहिलेको बाफिया संशोधनले पनि पूरा गरेको छैन । यसमा हामीले कुनै छुट र सहुलियत प्राप्त गरेको अवस्था छैन ।
तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले गत वर्षजस्तो लाभांश दिन सक्छन् ?
अघिल्लो वर्ष नाकाबन्दी भए पनि सेयर बजार उकालो लागेको थियो । ऋणहरू राम्रा थिए । ऋण उठेका थिए, जसले गर्दा बैंकहरूलाई कुनै समस्या थिएन । अहिले तरलता अभाव भए पनि ब्याजदर अन्तरका कारण नाफामा खासै असर गर्दैन । दोस्रो त्रैमास पनि अझै सकिएको छैन ।
काम गर्नका लागि अझै ६ महिनाको अवधि बाँकी छ । नाफामा असर हुने देखिएको सम्भावना छैन । बैंकहरूको ब्यालेन्ससिट राम्रो हुन्छ । अहिले बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड बढेको छ, सँगै ऋणको ब्याजदर पनि बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको कुरा गर्दा नयाँ निक्षेपमा ब्याजदर बढेको हो, कर्जामा भने सबै खालका कर्जामा बढेको छ ।
जसले गर्दा ब्यालेन्ससिटमा असर गर्दैन । विकास बैंकको कुरा गर्दा हामीले कुनै पनि पुराना ऋणको ब्याजदर बढाएका छैनौं । अहिले वाणिज्य बैंकहरू तरलता अभावले अत्तालिएका देखिन्छन् । एउटा वाणिज्य बैंकबाट म आफैंले ऋण लिएको छु । ब्याजदर बढेको भुक्तभोगी म आफैं छु ।
हिजोको दिनको तुलनामा आज पनि विकास बैंकको ब्याजदर त्यति बढेको छैन । जबकि वाणिज्य बैंकको ब्याजदर धेरै बढेको छ । कतिपय वाणिज्य बैंकले विकास बैंकले भन्दा निक्षेपमा ब्याजदर बढी दिएका छन् ।
भनेपछि वाणिज्य बैंकबाट ऋण तान्न सक्ने अवस्थामा तपाईंहरू पुग्नुभएको हो ?
आजका दिनमा एउटा बैंकको ऋण अर्को बैंकले तान्न सक्ने अवस्था कसैसँग छैन । हिजोको दिनमा हामी के पीडित थियौं भने वाणिज्य बैंंकले हाम्रा राम्रा ऋणीलाई तानेर लगेका थिए । अहिले निक्षेपकर्तालाई तान्न खोजेका छन् । विकास बैंकभन्दा वाणिज्य बैंकले माथिल्लो रेट अफर गर्न थालेपछि विकास बैंकबाट बाणिज्य बैंकमा निक्षेप लैजाने हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकको दायरा फराकिलो छ भने हाम्रो दायरा छैैन । यति हुँदाहुँदै पनि विकास बैंकहरूको प्रोफिटाबिलिटी वाणिज्य बैंकको भन्दा कम छैन । हाम्रो बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २४ प्रतिशत बोनस दिएको छ । यो बोनस वाणिज्य बैंकको भन्दा कम छैन ।
छोटो अवधिमै बिग्रेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्टको सुधार कसरी सम्भव भयो ?
बैंकको सुधार मात्र भएन । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक पुछारको ३ नम्बरबाट अहिले अगाडिको ३ नम्बरमा आएको छ । हामीले काम गर्ने शैलीमा संस्थागत सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं । हिजोका बिग्रेका कर्जाहरू रिकभरीमा बढी जोड दियौं भने नयाँ व्यापारमा बढी जोड दिएका थियौं । संस्थागत सुशासनमा हामीले गरेको काम धेरै नै राम्रो भयो ।
गत वर्षको ब्यालेन्ससिट राष्ट्र बैंकबाट पारित भएर आएको छ, जहाँ संस्थागत सुशासनको कुनै पनि समस्या नभएको उल्लेख छ । बैंकिङ कसुरका फाइलहरू जुन साँच्चिकै समस्यामा परेका थिए । त्यसमा पनि हामीले असुली गर्न सफल भयौं ।
९ प्रतिशतको एनपीएललाई २ प्रतिशत झार्न सफल भयौं भने ३८ प्रतिशतको बिजनेस ग्रोथ हासिल गर्न सफल भयौं । बैंकमा मबाहेक अरू सबै कर्मचारी पुराना हुन् । कर्मचारीको मनोबल बढायौं, जसले गर्दा काम गर्न सहज भयो ।
तपाईंले बैंकलाई सुधार गरेको आधारमा भन्नुहोस्, बैंकहरू किन समस्यामा पर्ने रहेछन् ?
बैंक बिजनेस टिम स्पिरिडमा चल्ने हो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ऋण धितोमा आधारित भएर गएको हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले प्राजेक्ट बेसमा पनि ऋण दिएका हुन्छन् । तपाईंहरूसँग राम्रो धितो छ भने पैसा उठाउन सम्भव छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको रिकभरी राम्रो भयो । यसमा हाम्रो धितो राम्रो थियो ।
शतप्रतिशत नउठे पनि ८५ प्रतिशत राम्रो हो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच राम्रो तालमेल भयो भने काम गर्न सकिन्छ । म आफू यहाँ आउनुभन्दा अगाडि प्रुडेन्सियल फाइनान्समा थिएँ । सुधार भएपछि नै एनएमबीसँग फाइनान्स मर्जरमा गएको हो । एक वर्षमा त्यहाँ २३ करोड उठेको थियो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्टमा बैंकमा मिराकल भएको हो । अब आन्तरिक समस्या आउँदैन ।
बिग्रिएको बैंक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले टोली पठाउनुपर्ने पनि रहेनछ होइन ?
साँच्चिकै सुधार गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले टोली पठाएर गर्ने सुधारभन्दा बजार आफैंले गर्ने सुधार राम्रो हुन्छ । रिकभरी भन्ने कुरामा डेडिकेसन बढी चाहिन्छ । यसका लागि जागिर खाने मनस्थितिले हुँदैन । बिग्रेका संस्थामा ऋण उठाउने प्रक्रियामा कानुनी र अन्य प्रकारका झन्झट बढी हुन्छन् । यो झेलेर बस्न सक्नेले सुधार गर्न सक्छ ।
तपाईंहरूलाई नाम फेर्न केन्द्रीय बैंकले दबाब दिएको भन्ने आएको छ । किन नाम फेर्न दबाब दिएको हो ?
केन्द्रीय बैंकले सिद्धार्थका नाममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पहिले स्वीकृति दिएको थियो, जसमा सबैभन्दा पहिले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक आएको हो । हामी मर्जरमा जाँदा केन्द्रीय बैंकले नाम परिवर्तन गर्न भनेको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन बाध्यकारी हुन्छ । मर्जरको स्वीकृति दिँदा आगामी साधारणसभाबाट नाम फेर्न भनिएको थियो ।
तर, हालै भएको बैंकको साधारणसभाले नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेन । पाँचवटा नामको विकल्प लिएर साधारणसभामा गए पनि बहुमत सेयरधनीहरूले नाम परिवर्तनका प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । नाममा संवेदनशीलता जोडिएको हुने रहेछ । हाम्रा ८० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी बुटवलका हुनुहुन्छ ।
उहाँहरूको भनाइ सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक पहिले आएको हुँदा नाममा हाम्रो हक हुन्छ भन्ने छ । तर, सीईओका रूपमा मैले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालन गर्नुपर्छ । यसमा केन्द्रीय बैंकको निर्देशन जे हुन्छ त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले भने अनुसारको २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा जान कत्तिको सहज छ ?
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका हकमा खासै समस्या छैन । तर, समग्रमा वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने सहज भने छैन । कर्पोरेट लोन दिएजस्तो यस्तो ऋण दिन सहज हुँदैन । हामीले भने गत वर्षदेखि विपन्न वर्गमा सीधै कर्जा दिनुपर्छ भनेर त्यो अनुसार काम गर्न सुरुवात गरिसकेका थियौं ।
ब्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्र नकारात्मक असर